Ururka Iskaashiga Islaamka Ee Muqdisho Ku Shiray Ma Ka Jawaabi Doonaan Codsigii Kheyre? – Kalfadhi
Ururka Iskaashiga Islaamka Ee Muqdisho Ku Shiray Ma Ka Jawaabi Doonaan Codsigii Kheyre?
in Falanqeyn, Warar
Soomaaliya oo lagu dhiirran karo in la maalgashado waxay u baahan tahay in shaqo fiican laga sameeyo dhammaan kaabayaasha, farsamooyinka iyo qaaciddooyinka u noqon kara madal in loo babac dhigo maalgelinta dal kasoo kabanaya dagaalo sokeeye, argagixisanimo iyo dowlad la’aan eyey muujiyeen aragtiyo kala duwan, oo ay Kalfadhi la wadaageen dad falanqeeya arrimaha xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadda dhaqaalaha, kaddib markii uu reysal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ku celceliyey iney Soomaaliya uga baahan tahay dalalka Ururka Iskaashiga Islaamka (OIC) iney maalgashadaan Soomaaliya, markii uu uga furayey Muqdisho 27-kii bishan shir ay kasoo qeyb-galeen 11 xubnood oo ka tirsan kooxda xiriirka Soomaaliya ee OIC-da.
“ Meel magaalooyin isu jira 50 KM diyaarado loo kala raacaayo ammaan xumo darteed, see ajanabi u maalgashanaayaa?” ayuu isweydiiyey Barafasoor Cabdicasiis Ibraahim oo Cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Soomaaliya. Waxa uu sheegay in ammaanka Soomaaliya oo ah sida uu hadda yahay aysan xitaa ku dhacin ganacsatada Soomaalidu iney maalgashadaan dalkooda.
“Soomaalidu wey haystaan lacag, laakiin waxay la’ yihiin meel ay uga shaqeystaan, markaasey lacagtii oo dhan dhul ku wada iibsadeen” ayuu yiri bare Cabdicasiis Ibraahim.
Sida uu Reysal Wasaare Kheyre u sheegay OIC-da, waxa uu ku doodayaa iney labadii sano ee tagtay Soomaaliya hormar fiican ka sameysay dhinacyada ammaanka, siyaasadda, arrimaha bulshada iyo maaliyadda. “ Inkasta oo aan ku faraxsanahay gargaarka iyo kaalmeynta kale ee aad siineyseen, waxaan doorbideynaa inaan idinla yeelano ganacsi iyo inaan idinku soojiidano maagashigiina. Waxaan rabnaa in ay OIC ka faa’iideysato fursadaha maagashiga xawliga ah ee ka jira Soomaaliyadaan cusub ” ayuu yiri Kheyre.
Axmed Cabdirisaaq Cabdullaahi (Qamsa) oo ah bare ka dhiga Jaamacadaha Muqdisho cilmiga xiriirka caalamiga ah ayaa u sheegay Kalfadhi iney muhiim ahayd inuu RW Kheyre soo bandhigo baahida ay Soomaaliya u qabto in la maalgashado.
Waxa uu sheegay iney muhiimad gaar ah leedahay in ay Soomaaliya ka faa’iideysato ka mid ahaanshaheeda Ururka Iskaashiga Islaamka. “ Dowladda Soomaaliya waxyaabaha ay mustaqbal dhaw ka heli karto OIC-da waxaa ka mid ah in laga qaado cuno-qabateynta xoolaha ” ayuu yiri Qamsa.
“Waxyaabaha uu ka taageeri karo waxaa ka mid ah dhanka waxbarashada, bangiga Islaamka oo ka taageero dhinaca maalgelinta iyo in la maalgashado dhulka Soomaalida ” ayuu raaciyey hadalkiisa.
“ Haddii uusan jirin qorsho uga diyaarsan Dowladda Federalka ah maalgashiga ajanabiga ah, waxa uu hadalka Reysal Wasaaraha noqonayaa hadal iska caadi ah ” ayuu yiri borofasoor Cabdicasiis Ibraahim.
Waxa uu u sheegay warbaahinta Kalfadhi in Soomaaliya ay weydiisato maalgashi in ay uga horreyso iney is diyaariso ammaan ahaan, dhaqan ahaan iyo qorshe ahaan. “ Meel aysan dadkeedu is dhex geleyn wey adag tahay inuu ajanabi soo galo ” ayuu yiri bare Cabdicasiis.
Laakiin, Axmed Qamsa ayaa sheegay in haddii uu Bangiga Islaamka ka caawiyo Soomaaliya in loo dhaafo deymaha lagu leeyahay, “ taasoo ku xiran” buu yiri “in aysan Soomaaliya hadda u baahneen deen kale”.
“ Waxay ku caawin kartaa dalka inuu helo taageero maalgashi, kaalmo dhaqaale iyo iney dalalka kale ee deymaha kugu leh kaa cafiyaan ” ayuu yiri Qamsa. “Laakiin marka la fiiriyo siyaasadda dibadda, Soomaaliya maantadaan guul ay gaareyso ma jiraan ” ayuu yiri hadalkiisa sii raaciyey.
Dr Maxamed Nuur Gacal oo ah wasiiru dowlihii arrimaha dibadda Soomaaliya ee hore ayaa u arka in ay u tahay horay u socod Soomaaliya oo markii hore gargaar uun weydiisan jirtay maantana taagan “ hanala maalgashado” sida uu hadalka u dhigay.
Waxa uu sheegay iney noqon karto wax dhiiragelin kara OIC inuu Reysal Wasaaruhu sheegay iney Soomaaliya diyaar u tahay la imaanshiyaha dhammaan kaabayaasha keeni kara in la maalgashado dalka.
“In ay Soomaaliya leedahay aan wax isku darsano caalamka, halkii ay markii hore ka ahaan jirtay wax hanala siiyo, waxay xitaa dhiiragelineysaa aduunka oo dhan, oo ka fekeraya fursadaha Soomaaliya ka jira” ayuu yiri mudane Gacal.
Cabdicasiis Ibraahim waxa uu qabaa in Dowladda Federalka Soomaaliya ay tusiso adduunka fursad ku keeni karta iney ka fekeraan in ay Soomaaliya la sameystaan xiriir ganacsi iyo mid maalgashi intaba.
“ Laakiin tuugsi cid kugu maalagashaneysa ma jirto ” ayuu yiri. “ Waa in lagaa dhex arkaa fursad ” ayuu hadalkiisa raaciyey.
Nuur Cali Faarax
Golaha Shacabka oo Ka Shaqeynaya Badbaadinta Caafimaafka Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya
Aragti: Galmudug Oo U Dhaxeysa Abaal Marinta Garowe & Gogosha Xamar